Fitsangatsanganana an-tsambo - Torohevitra handaminana ny dia tsara indrindra. Vaovao momba ny dia
Torohevitra momba ny drafitra fitsangantsanganana an-tsambo
Susana godoy | 23/09/2021 18:27 | Sambo fitsangantsanganana
Raha efa mieritreritra fitsangantsanganana an-tsambo ianao dia fotoana mety hanaovana drafitra tonga lafatra. Tsy misy zavatra hadinonay! Saingy tsy ny resaka enta-mavesatra ihany fa ny fandaminana tsara mba hamatorana tsara ny zava-drehetra ary manomboka aloha be noho izay eritreretintsika izany.
Fantatsika fa ho fotoana tsy manam-paharoa io, andro vitsivitsy tsy hay hadinoina, ary mba hialana amin'ireo rehetra ireo, dia tsara ny manaraka dingana maromaro. Ny fikolokoloana fitsangantsanganana an-tsambo no tena mahavariana Ary satria tsy tianay ianao hamela ny zava-drehetra amin'ny minitra farany, manoro hevitra anao fotsiny izahay mba hahita ny tsy ampoizina anananao ho anao.
1 Misafidiana iray amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra
2 Aza miandry mandra-minitra farany vao hanao ny famandrihana
3 Kobeta iza no tokony hofidiko
4 Inona no eny ary inona no tsy tokony ho entiko ao anaty valizy
Misafidiana iray amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra
Angamba efa manana toeran-javatra manokana ao an-tsainao ianao, satria marina fa rehefa mandinika dia fitsangatsanganana ianao dia mety izany. Fa raha tsy izany dia tsy maintsy dinihinao ihany koa ireo izay be mpitady, mba tsy ho lany eo amin'ny toeranao ianao. Ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediteraneana dia iray amin'ireo safidy lehibe. Fa maninona Eny, satria manolotra antsika mihoatra lavitra noho ireo sary tsy hay hadinoina. ny Fitsangatsanganana an-dranomasina any Gresy manasa anao hahita ireo nosy rehetra feno angano sy tsangambato izay tsy maintsy jerenao manokana, farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao.
Etsy andaniny Atena, avy any Kreta, Mykonos na Santorini. Amin'ny fanonona azy ireo fotsiny dia fantatsika fa hanana ny fitambarana kolontsaina sy torapasika manokana eto amin'izao tontolo izao isika. Raha etsy ankilany, koa ny fitsangantsanganana an-dranomasina Karaiba dia iray amin'ireo safidy takiana nefa tsy atao ambanin-javatra ny avaratr'i Eropa izay mamela antsika hankafy an'i Norvezy, Saint Petersburg hatrany Stockholm na Copenhagen. Ny fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny fjords na ny renivohitra Baltika dia mety ihany koa amin'ny fitsangatsanganana an-tsambo!
Aza miandry mandra-minitra farany vao hanao ny famandrihana
Tsy dia lavitra azontsika atao ao anatin'ny fotoana fohy, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manandrana manomana azy mialoha ary raha nofinofisintsika izany dia tsy afaka manemotra izany intsony isika. Izany no antony tsy ahafahanay manome anao fotoana ara-drariny fa manakaiky: Herintaona mialoha no mety indrindra, na dia marina aza fa indraindray vitantsika hatramin'ny roa taona talohan'izay. Raha toa be loatra izany dia tadidio izany Anisan'ireo tombony azo amin'ny fanaovana famandrihana aloha ny fahafahana misafidy ireo karazana fitsangantsanganana an-tsambo sy ny làlan-kalehany, ny fisian'ny daty na ny kabine lehibe indrindra, satria izy ireo matetika no voatokana mialoha. Tsy manadino fa afaka manararaotra fampiroboroboana sasany ianao raha manao famandrihana haingana araka izay tratra. ny fitsangantsanganana an-dranomasina 2022 azo omena anao izao!
Kobeta iza no tokony hofidiko
Ity dia iray amin'ireo fanontaniana be mpitady indrindra ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy maintsy lazaina fa ny sambo fitsangantsanganana izay alehanao dia afaka manoro hevitra anao foana arakaraka ny karazana sambo. Mbola holazainay aminao ihany izany Raha mbola tsy nandeha sambo ianao dia tsara kokoa ny misafidy kabine amin'ny faritra afovoany ary amin'ny birao ambany. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria izy io dia iray amin'ireo faritra izay tsy dia tsikaritra loatra ny fivezivezin'ny sambo ary izany dia hisakana antsika tsy ho rendrehana. Ny kabine amin'ny faritra ambany dia atolotra rehefa tena matory ao ianao ary ampy fotsiny. Mifanohitra amin'izany no izy, raha mieritreritra ianao fa afaka mandany fotoana bebe kokoa amin'io fitsaharana io, dia andramo ny manalavitra azy amin'ireo faritra ivondronan'ny olona maro kokoa.
Inona no eny ary inona no tsy tokony ho entiko ao anaty valizy
Ny famonosana entana dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny fitsangatsanganana rehetra misy sira. Noho izany, tsy misy toa ny filokana amin'ny fandaminana izany ary tsara. Adinontsika tanteraka ilay andian-teny hoe 'Raha sanatria' satria any am-parany dia valizy mihoatra ny kilao avela no ahitantsika ny tenantsika. Ka, tadidio fa tokony hitafy akanjo mahafinaritra ianao amin'ny andro amin'ny kiraro izay tsy solafaka. Samy ho eny an-tsambo sy handeha hanao fitsangatsanganana, na dia eto aza dia hanova ny fomba kiraro isika.
Amin'ny hariva, marina fa indraindray dia hahita sakafo hariva tsy ara-potoana bebe kokoa isika. Ka azonao atao ny manampy akanjo iray izay. Ny akanjo fanatanjahan-tena sy ny akanjo fandroana koa dia takiana. Na dia tokony ho hitanao aza raha efa manana izany eny ambony sambo ianao dia afaka mitondra kapoaka kely foana miaraka amin'ny gel na shampooing anao. Fa eny, aza mitondra fanamainana volo na vy ho an'ny volonao na fitafianao. Satria zavatra tsy avela matetika izany. Ka mifantoha tsara amin'ny akanjo, kojakoja ary mazava ho azy, ny borosy nify na finday izay tsy hadinonao. Mazava ho azy fa tsy maintsy ampidiro ny pasipaoro sy ny kara-panefatra. Vonona ny hiondrana an-tsambo ianao amin'izay ho fialan-tsasatra tsara indrindra amin'ny fiainanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Sambo fitsangantsanganana » Torohevitra momba ny drafitra fitsangantsanganana an-tsambo